လူဇင်ဘတ်၏ Jacquetta: အ Roses ပုံ၏စစ်ပွဲများ
အဆိုပါ Roses ၏စစ်ပွဲများ၏အချိန်အတွက်အစွမ်းထက်အမျိုးသမီး
လူသိများ: ၏မိခင် ဧလိရှဗက် Woodville , အင်္ဂလန်ဘုရင်မဘုရင်၏ကြင်ယာတော် အက်ဒွပ် IV , နှင့်သူမ၏တဆင့်ဘေးမ ရှိဖို့နဲ့အစိုးရသောမင်းတို့ နှင့်အင်္ဂလန်နှင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်၏နောက်ဆက်တွဲသောမင်းတို့။ ထိုအ Jacquetta မှတဆင့်ဧလိရှဗက် Woodville အများအပြားအင်္ဂလိပ်ရှငျဘုရငျတို့ထံမှဆင်းသက်တော်မူခဲ့သည်။ အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီအပေါင်းတို့နှင့်တကွအောက်ပါဗြိတိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်မှူးဘိုးဘေး။ သူမ၏သမီး၏အိမ်ထောင်ကိုစီစဉ်ဖို့စုန်းအတတ်ကိုအသုံးပြုပြီး၏စွပ်စွဲတယ်။
ရက်စွဲများ: မေလ 30, 1472 အကြောင်း 1415
Jaquetta, Bedford ၏ Duchess, သမ္မတကတော်မြစ်ချောင်းများ: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
Jacquetta သူမ၏မိဘများ '' ကိုးသားသမီးများ၏အသက်အကြီးဆုံးကလေးသည်ရှိ၏ သူမ၏ဦးလေးလူးဝစ်, နောက်ပိုင်းဆရာတော်ဖြစ်, ပြင်သစ်၏ဦးရစ်သရဖူအားမိမိပြောဆိုချက်ကိုအတွက်အင်္ဂလန်ဘုရင်ဟင်နရီ VI ကိုတစ်ခုမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏နည်းနည်းစံချိန်ရှင်သန်နေဆဲသော်လည်းသူမသည်ဖြစ်ကောင်း, သူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် Brienne ၌နေ၏။
Jacquetta ရဲ့မြင့်မြတ်သောအမွေအနှစ်သူမ၏အင်္ဂလန်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ကဟင်နရီ VI ကို, Bedford ၏ယောဟန်၏အစ်ကိုများအတွက်လျောက်ပတ်ဇနီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယောဟန်သည် 43 နှစ်အရွယ်မှာ, သူသည်ပြင်သစ်အတွက်အခမ်းအနားအတွင်း 17 နှစ်အရွယ် Jacquetta လက်ထပ်မတိုင်ခင်အခမ်းအနား Jacquetta ၏ဘထွေးအားဖြင့်ကျော်သဘာပတိအဖြစ်နှစ်တွင်ဘေးဥပဒ်မှကိုးနှစ်၏မိန်းမသည်သူ၏မယားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ဟင်နရီ V ကိုမကြာခဏ Bedford အဖြစ်လူသိများ 1422. ယောဟနျ, သေဆုံးသည့်အခါဆရာယောဟနျသငယျဟင်နရီ VI ကိုအရွယ်မရောက်အဖြစ်အချိန်များအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပြင်သစ်ဦးရစ်သရဖူမှဟင်နရီရဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုနှိပ်ဖို့ကြိုးစားမှပြင်သစ်တိုက်ကြ၏။
သူကအင်္ဂလိပ်ဆန့်ကျင်စစ်ပွဲ၏ဒီရေလှည့်ခဲ့သော Arc ၏ဂျုံး၏တရားခွင်နှင့်သေဒဏ်စီရင်, စီစဉ်ဘို့နှင့်ဟင်နရီ VI ကိုပြင်သစ်ဘုရင်အဖြစ်သရဖူဆောင်းခံရဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်များအတွက်လူသိများသည်။
ဤသည် Jacquetta များအတွက်ဒဏ်ငွေလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်။ သူမနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းလအနည်းငယ်ကသူတို့လက်ထပ်ပြီးနောက်အင်္ဂလန်သို့သွားကြ၏, သူ Warwickshire အတွက်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့အိမ်မှာနှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိနှစ်ဦးစလုံးအသက်ရှင်။ ,
သူမသည်မကြာခင်မှာပဲသောနောက် 1434. အတွက် Garter ၏ဂုဏ်သတင်းအမိန့်မှဝန်ခံခဲ့သည်ခဲ့ပါသည်, ထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးထိုအရပ်၌ရဲတိုက်မှာ Rouen တှငျနထေိုငျဖြစ်ကောင်း, ပြင်သစ်မှပြန်လာ၏။ သို့သော်ဆရာယောဟနျအင်္ဂလန်, ပြင်သစ်နှင့် Burgundy ကိုယ်စားပြုသံတမန်များအကြားသဘောတူစာချုပ်အဘို့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမကုန်မီတစ်ပါတ်ကသူ့ရဲတိုက်မှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာထက်နည်းနှစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်ပေါင်းလက်ထပ်ခဲ့သညျ။
Jacquetta အင်္ဂလန်မှလာရန်အဘို့အယောဟန်၏သေသောနောက်, ဟင်နရီ VI ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဟင်နရီသူမ၏ခရီးတာဝန်ခံဖြစ်သည်, မိမိနှောင်းပိုင်းကအစ်ကိုရဲ့ Chamberlain, ဆာရစ်ချတ် Woodville (လည်းစာလုံးပေါင်း Wydevill) ဟုမေး၏။ သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့မြေများအချို့နှင့်၎င်းတို့ထံမှဝင်ငွေလောက်သုံးပုံတစ်ပုံမှ dower အခွင့်အရေးများရှိခဲ့နှင့်ဟင်နရီအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးလက်ထပ်ထိမ်းမြားဆုပါလိမ့်မယ်။
Jacquetta နှင့်မဟုတ်ဘဲဆင်းရဲသားကိုရစ်ချတ် Woodville မေတ္တာ၌လဲကျ, စောစော 1437 ခုနှစ်လျှို့ဝှက်စွာလက်ထပ်မဆိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားပြတ်တောက်မင်းကြီးသည်ဟင်နရီခဲ့ကြပေမည်စီစဉ်ထားနှင့်ဟင်နရီရဲ့အမျက်ဒေါသ drawing ။ သူမကတော်ဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလက်ထပ်လျှင် Jacquetta သူမ၏ dower အခွင့်အရေးများကိုလေ့ကျင့်နိုင်မှထင်မခံခဲ့ရပါ။ ဟင်နရီစုံတွဲတစျထောငျပေါင် fining, ထိုကိစ္စအခြေချခဲ့သည်။ သူမသည် Woodville မိသားစုမှစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားသာချက်များခဲ့သောရှငျဘုရငျ၏မျက်နှာသာ, ပြန်သွားကြ၏။ သူမသည်ရှိသူမ၏ dower အခွင့်အရေးအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါ, ဒုတိယအိမ်ထောင်မင်္ဂလာ၏သူမ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်များတွင်ပြင်သစ်မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လေ၏။
Jacquetta လည်းဟင်နရီ၏ဇနီးတစ်ဦးကွန်နက်ရှင်ခဲ့သူမ၏ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့်ဟင်နရီ VI ကိုရန်ဆက်သွယ်မှုများအပြင်, Anjou ၏မာဂရက် : သူမ၏အစ်မမာဂရက်၏ဘထွေးလက်ထပ်ခဲ့သည်။ တောင်မှဟင်နရီ IV ရဲ့အစ်ကို၏မုဆိုးမအဖြစ်, Jacquetta, protocol ကိုအသုံးပြုပုံမိဖုရားသူ့ကိုယ်သူ မှလွဲ. အခြားမည်သည့်တော်ဝင်အမျိုးသမီးတွေထက်တရားရုံးမှာပိုမိုမြင့်မားရာထူးရှိခဲ့ပါတယ်။
မာဂရက်ပါတီငယ်ရွယ်ဆောင်ခဲ့နှင့်အတူပြင်သစ်ကိုသွား, သူမ၏အမြင့်ဆုံးရာထူးနှင့်ဟင်နရီ VI ကိုရဲ့မိသားစုမှအိမ်ထောင်မင်္ဂလာအားဖြင့်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်, ရှေးခယျြခဲ့ Anjou ၏မာဂရက် ဟင်နရီ VI ကိုလက်ထပ်ဖို့အင်္ဂလန်ရန်။
Jacquetta နဲ့ Richard Woodville တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာနှင့်အရှည်လျားလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သညျ။ သူတို့ဟာ Grafton, Northamptonshire တစ်အိမ်မှာဝယ်လိုက်တယ်။ တဆယ်လေးယောက်ကလေးများကသူတို့ကိုမှမွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်အကြီးဆုံးသားသူ Lewis က, ဒုတိယအကွီးဆုံး, - - တစ်ဦးတည်းသာ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်အချိန်ကာလနာဘေးကို-စီးကြိမ်အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားကျန်းမာစံချိန်အနိစ္စရောက်လေ၏။
အဆိုပါ Roses ၏စစ်ပွဲများ
ယခု Roses ၏စစ်ပွဲများကိုခေါ်ဆက်ခံကျော်ရှုပ်ထွေး intrafamily ရန်ငြိုးထားခြင်း, ခုနှစ်, Jacquetta နှင့်သူမ၏မိသားစုသစ္စာစောင့်သိ Lancastrians ခဲ့ကြသည်။ ဟင်နရီ VI ကိုကြောင့်မိမိအစိတ်ပိုင်းပြိုကွဲရန်သူ၏တိုးချဲ့အထီးကျန်မှုတွေ၌ရှိ၏, နှင့် Edward IV ရဲ့ Yorkist တပ်မတော် 1461 ခုနှစ်တွင်လန်ဒန်၏တံခါးခဲ့တဲ့အခါ, Jacquetta မြို့အ vandalizing ထံမှ Yorkist တပ်မတော်ကိုစောင့်ရှောက်ရန် Anjou ၏မာဂရက်နှင့်ညှိနှိုင်းရန်ဟုမေးခဲ့သည်။
Jacquetta ရဲ့သမီးကြီးဧလိရှဗက် Woodville, ဆာဂျွန် Grey က၏ခင်ပွန်း Anjou ၏မာဂရက်၏ command ကိုအော Lancastrian စစ်တပ်နှင့်အတူစိန့် Albans ၏ဒုတိယတိုက်ပွဲအတွက်စစ်တိုက်ကြ၏။ အဆိုပါ Lancastrians အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း, Grey ကစစ်တိုက်၏ထိခိုက်သေဆုံးမှုအကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Yorkists အားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ Towton ၏စစ်တိုက်ခြင်းငှါ, ပြီးနောက်, Jacquetta ၏ခင်ပွန်းနှင့်သူမ၏သားအန်သိုနီ, အရှုံးနိမ့ခြမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, လန်ဒန်၏မျှော်စင်များတွင်အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။ အက်ဒွပ်ကြောင့်စစ်တိုက်အနိုင်ရကူညီပေးခဲ့သည်ခဲ့သော Burgundy ၏ Duke မှ Jacquetta ရဲ့မိသားစုဆက်သွယ်မှု, ဖွယ်ရှိ Jacquetta ရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့သားသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. , သူတို့လအနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
အက်ဒွပ် IV ရဲ့အောင်ပွဲ Jacquetta ရဲ့မြေများသစ်ကိုရှငျဘုရငျသဖွငျ့သိမ်းယူခဲ့, အခြားဆုံးရှုံးမှုများတို့တွင်ဆိုလိုသညျ။ ဒါကြောင့်လူငယ်နှစ်ဦးယောက်ျားလေးများနှင့်အတူမုဆိုးမတစ်ဦးကျန်ရစ်ခဲ့သူ Jacquetta ရဲ့သမီး, အဲလစ်ဇဘက်အပါအဝင် Lancastrian ဘက်မှာခဲ့သောအခြားမိသားစုများ, သူတို့တည်း။
အဲလစ်ဇဘက် Woodville ရဲ့ဒုတိယအအိမ်ထောင်ရေး
အက်ဒဝပ်ရဲ့အောင်ပွဲလည်းအင်္ဂလန်မှစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်မဟာမိတ်များကိုရောက်စေမယ်လို့သူတစ်ဦးကနိုင်ငံခြားမင်းသမီးမှသစ်ကိုရှငျဘုရငျကိုလက်ထပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်စားပြု။ အက်ဒွပ်လျှို့ဝှက်စွာနှင့်ရုတ်တရက်ငယ်ရွယ် Lancastrian မုဆိုးမ, ဧလိရှဗက် Woodville, Jacquetta ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးသမီးနှင့်လက်ထပ်တဲ့အခါမှာအက်ဒွပ်၏မိခင်, Cecily နဗီး, သူ၏ဝမ်းကွဲ, ရစ်ချတ်နဗီး, Warwick ၏ Earl (ထို Kingmaker အဖြစ်လူသိများ), အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။
ရှငျဘုရငျကိုသူမလမ်းနားမှာသူ့ကိုယ်သူ positioned သည့်အခါသူကအမဲလိုက်ခရီးစဉ်အပေါ်လွန်အဖြစ်ရှငျဘုရငျ၏မျက်စိဖမ်းရန်, သူမ၏ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားထံမှသူမ၏သားနှစ်ဦးနှင့်အတူ, အမှန်တရားထက်ပိုပြီးဒဏ္ဍာရီဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အဆိုအရအဲလစ်ဇဘက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်ဖူး သူမ၏မြေများနှင့်ဝင်ငွေများ၏ပြန်လာဘို့သူ့ကိုတောင်းပန်ပါ၏။ တချို့က Jacquetta ဒီတှေ့ဆုံစီစဉ်ပေးကြောင်းစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ ရှငျဘုရငျကိုသူမ (ဒါကြောင့်ဇာတ်လမ်းသွား) မိမိသခင်မဖြစ်လာရန်ငြင်းဆန်သောအခါ, ထိုသူမ၏လက်ထပ်အဲလစ်ဇဘက်နှင့်အတူလုပ်ကြံခြင်းနှင့်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါမင်္ဂလာဆောင်မှသာအက်ဒွပ်, အဲလစ်ဇဘက်, Jacquetta, ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကíနပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူမေလ 1, 1464 ရက်တွင် Grafton မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလအကြာမှာထုတ်ဖော်ခဲ့သည်သိသိသာသာပြီးနောက် Woodville မိသားစု၏ဆောင်ခဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။
အလွန်ကြီးမားတဲ့ Woodville မိသားစု York ကရှငျဘုရငျ၏ဆွေမျိုးသားချင်းအဖြစ်၎င်းတို့၏အသစ်က status ကိုမှအကြိုး။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်အက်ဒွပ်ပွနျလညျထူထောငျ Jacquetta ရဲ့ dower အခွင့်အရေးနှင့်အရှင်သူမ၏ဝင်ငွေအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အက်ဒွပ်အင်္ဂလန်နှင့် Earl မြစ်ချောင်းများ၏ဘဏ္ဍာရေးမှူးသူမ၏ခင်ပွန်းခန့်အပ်ခဲ့သည်။
Jacquetta ရဲ့အခြားကလေးများအများအပြားအသစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လိုလိုလားလားလက်ထပ်ထိမ်းမြားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အများဆုံးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားကက်သရင်းနဗီး,-Norfolk ၏ Duchess မှသူမ၏ 20 နှစ်အရွယ်သားယောဟန်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်။ သူမကဆရာယောဟနျနဲ့လက်ထပ်တဲ့အခါမှာကက်သရင်းအက်ဒွပ် IV ရဲ့အမိ၏ညီမအဖြစ် Warwick တစ်ခုအဒေါ်ဟာ Kingmaker ကြီးနှင့်အနည်းဆုံး 65 နှစ်သမီးအရွယ်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာယောဟန်သည်ထက်ပိုပြီးသက်ဆိုးရှည်မယ်လို့ထွက်လှည့်အဖြစ်ကက်သရင်း, ပြီးသားသုံးခင်ပွန်း၏ထကျအသကျရှညျနှင့်ခဲ့သည်။
နောက်တဖန်တိုက်ပွဲများ၏ရှုပ်ထွေးစစ်ပွဲများအတွက် York နဲ့ Lancaster နှစ်ဖက်အကြားထွက်ဖဲ့အဖြစ်အက်ဒွပ်ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်သည်သူ၏အစီအစဉ်များအတွက်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့်သူ Woodvilles အားဖြင့်မျက်နှာသာထဲကတွန်းခဲ့သော Warwick, နှစ်ဖက်ပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်ဟင်နရီ VI ကိုထောကျပံ့ဖို့ဆုံးဖြတ် ဆက်ခံ။
အဲလစ်ဇဘက် Woodville နှင့်သူမ၏ကလေးများ Jacquetta အတူသန့်ရှင်းရာဌာနရှာခဲ့ရသည်။ အဲလစ်ဇဘက်ရဲ့သား, အက်ဒွပ် V ကို, ဖြစ်ကောင်းထိုကာလအတွင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
Kenilworth မှာ Jacquetta ရဲ့ခင်ပွန်း Earl မြစ်ချောင်းများနှင့်သူတို့၏သား, ယောဟန် (Warwick ရဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုများအဒေါ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့သူ) Warwick ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုကွပ်မျက်တော်မူခဲ့၏။ သူမ၏ခင်ပွန်းကိုချစ်၏ခဲ့သော Jacquetta, စိတ်မသာညည်းတွားသို့ သွား. , သူမ၏ကျန်းမာရေးခံစားခဲ့ရသည်။
လူဇင်ဘတ်, Bedford ၏ Duchess ၏ Jacquetta, 1472. သူမ၏အလိုတော်မဟုတ်သလိုသင်္ဂြိုဟ်၏သူမ၏ရာအရပျမဟုလူသိများသည်မေလ 30 ရက်နေ့တွင်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
1470 ခုနှစ်, Warwick ရဲ့ယောက်ျားတစ်ဦးကဖဲကြိုးဖြတ် Warwick, အက်ဒွပ် IV နှင့်သူ၏မိဖုရား, နောက်ထပ် Woodvilles ဖျက်ဆီးဖို့မဟာဗျူဟာ၏ဖွယ်ရှိစုတစုပုံရိပ်တွေအောင်နေဖြင့်စုန်းအတတ်လေ့ကျင့်၏ Jacquetta စွပ်စွဲတယ်။ သူမသည်တစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့်အားလုံးစွဲချက်၏ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ရစ်ချက် III ကိုဧလိရှဗက် Woodville မှအက်ဒွပ်၏မမှန်ကန်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကြေညာသည့်လုပ်ရပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ပါလီမန်ရဲ့အစွမ်းနှင့်အတူအက်ဒွပ် IV ရဲ့သေခြင်းပြီးနောက်တာဝန်ခံရှင်ပြန်ထမြောက်နှင့်အရှင်ဆက်ခံရာမှအက်ဒွပ်ရဲ့သားနှစ်ယောက်မဖယ်ရှားပါ (မျှော်စင်ရစ်ချတ်အတွက်မှူးမတ်ထောင်ချခံရသူခဲ့ကြသည် တစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီး) နောက်တဖန်မြင်ကြတာပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဆန့်ကျင်အဓိကငြင်းခုံအက်ဒွပ်သည်အခြားမိန်းမနှင့်လုပ်သောတစ်ဦးထင် precontract ခဲ့ပေမယ့်စုန်းတာဝန်ခံ Jacquetta အက်ဒွပ်, ရစ်ချတ်ရဲ့အစ်ကိုဝိဇ္ဇာအတတ်အားမှအဲလစ်ဇဘက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။
Philippa ဂရက်ဂိုရီရဲ့ဝတ္ထု, ထိုမြစ်ချောင်းများ၏ The Lady, Jacquetta အပေါ်အလေးပေး, သူ Gregory ရဲ့ဝတ္ထုအဆိုပါ White ကဘုရင်မကြီးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အဓိကကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပြီး 2013 ခုနှစ်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး နာမည်တူဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Jacquetta ရဲ့ပထမဆုံးခင်ပွန်းဖြစ်သူ Lancaster ဂျွန်, Bedford ၏ Duke ဟင်နရီ V ကို၌၎င်း, ဟင်နရီ VI ကိုအတွက်ရှိတ်စပီးယားရဲ့ဟင်နရီ IV အတွက်ဇာတ်ကောင်, စိတျအပိုငျး 1 နှင့် 2, အပိုင်း 1 ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်: Baux ၏မာဂရက် (Margherita del Balzo), အဘယ်သူ၏အဖေဘက်ကဘိုးဘေး Naples ၏ nobility ရှိ. , အဘယ်သူ၏မိခင်တစ်ဦး Orsini, အင်္ဂလန်ဘုရင်ယောဟန်၏တစ်ဦးဆင်းသက်လာခဲ့သည်။
ခမညျးတျော: လူဇင်ဘတ်၏ပတေရုသ (Pierre ၏), Brienne ၏ Saint-Pol နှင့်အရေအတွက်၏ Count ။ ပေတရု၏ဘိုးဘေးတို့ဘုရင်ကဟင်နရီအင်္ဂလန်၏ III ကိုနှင့်သူ့ကြင်ယာတော်, Provence ၏ Eleanor ပါဝင်သည်။
လူဇင်ဘတ်၏လူးဝစ်, Saint-Pol ၏အရေအတွက်။ ပြင်သစ်နဲ့ Mary ဘုရင် Henry IV, စကော့ဘုရင်မ၏ဘိုးဘေး။ ပြင်သစ်ဘုရင်လူးဝစ် XI ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်မှုအတွက်ခေါင်းဖြတ်သတ်။
လူဇင်ဘတ်၏ Thibaud, Brienne, Le Mans ၏ဘိရှော့၏အရေအတွက်
လူဇင်ဘတ်၏ Valeran လူငယ်သေဆုံး
လူဇင်ဘတ်၏ကက်သရင်းအာသာ III ကို, Brittany ၏ Duke လက်ထပ်
လူဇင်ဘတ်, သောအသွင်၏ Countess ၏ Isabelle, ချားလ်စ်နဲ့လက်ထပ်, မိန်း၏ Count
: အသေးစိတ်ကို ဧလိရှဗက် Woodville ၏မိသားစုသစ်ပင် (Jacquetta ရဲ့ကြီးကလေးက)
ခင်ပွန်း: Lancaster ဂျွန်, Bedford ၏ Duke (1389 - 1435) ။ အိမ်ထောင်သည်ဧပြီလ 22, 1433. ဂျွန်ဟင်နရီသည်အင်္ဂလန်၏ IV နှင့်သူ၏ဇနီး, မာရိက de Bohun ၏တတိယသား ဖြစ်. , ဟင်နရီ IV Gaunt ဂျွန်နှင့်သူ၏ပထမဇနီး, အ Lancaster မွေဆက်ခံသူ, Blanche ၏သားခဲ့သညျ။ ယောဟနျသ, အရှင်သူယခင်က Lancaster ၏ 1432. ဆရာယောဟနျအတွက် 1423 ကနေသူမသေဆုံးခင်အထိ Burgundy ၏အန်းမှလက်ထပ်ခဲ့မင်းကြီးသည်ဟင်နရီ V. ၏ညီ Rouen အတွက်စက်တင်ဘာလ 15, 1435 ရက်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ကအခြားသူတွေထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်သူမကနောက်ပိုင်းမှာခွင့်ရှိသည်ပြီမယ်အဖြစ် Jacquetta, Bedford ၏ Duchess ၏အသက်အဘို့အခေါင်းစဉ်ထိန်းသိမ်းထား။
ခင်ပွန်း: ဆာရစ်ချတ် Woodville, သူမ၏ပထမဦးဆုံးခင်ပွန်းရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦး Chamberlain ။ ကလေးများ:
အဲလစ်ဇဘက် Woodville (1437 - 1492) ။ အိမ်ထောင်သည်သောမတ်စ် Grey က, ထို့နောက်အက်ဒွပ် IV လက်ထပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးခင်ပွန်း၏ကလေးများ။ အက်ဒွပ် V နှငျ့၏မိခင် York မြို့၏ဧလိရှဗက် ။
Lewis က Wydeville သို့မဟုတ် Woodville ။ သူကငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၌သေကြ၏။
အန်း Woodville (1439 - 1489) ။ အိမ်ထောင်သည်ဝီလျံ Bourchier ဟင်နရီ Bourchier နှင့်ကိန်းဘရစ် Isabel ၏သား။ အိမ်ထောင်သည်အက်ဒွပ် Wingfield ။ ဂျော့ခ်ျ Grey ကဦး Edmund Grey ကနှင့်ကက်သရင်းပါစီသားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။
အန်သိုနီ Woodville (1440-42 - 25 ဇွန် 1483) ။ အိမ်ထောင်သည်ဧလိရှဗက်က de မာရိသညျ Fitz-Lewis ကလက်ထပ်ပြီးရင်, Scales ။ ဘုရင်ကရစ်ချက် III ကိုသူ့ရဲ့တူလေးရစ်ချတ် Grey ကအတူကွပ်မျက်ခံရ။
ယောဟနျသ Woodville (1444/45 - 12 သြဂုတ် 1469) ။ အဆိုပါအများကြီး-အဟောင်းတွေကက်သရင်းနဗီး,-Norfolk ၏ Dowager Duchess, Ralph နဗီးနှင့်သတို့သမီးလက်ထပ် ဂျုံး Beaufort နှင့်၏နှမ Cecily နဗီး ကသူ့အစ်မအဲလစ်ဇဘက်ရဲ့မိခင်-In-ဥပဒ။
Jacquetta Woodville (1444/45 - 1509) ။ အိမ်ထောင်သည်ယောဟနျသ le ထူးဆန်း, ရစ်ချတ်သည် Le ထူးဆန်းနှင့်ဧလိရှဗက်က de Cobham ၏သား။
Lionel Woodville (1446 - တွေအကြောင်း 23 ဇွန် 1484) ။ Salisbury ၏ဆရာတော်။
ရစ်ချတ် Woodville ။ (-? 06 မတ်လ 1491) ။
မာသ Woodville (1450 - 1500) ။ အိမ်ထောင်သည်ယောဟနျသ Bromley ။
Eleanor Woodville (1452 - အကြောင်းကို 1512) ။ အိမ်ထောင်သည်အန်သိုနီ Grey က။
မာဂရက် Woodville (1455 - 1491) ။ အိမ်ထောင်သည်သောမတ်စ် FitzAlan ဝီလျံ FitzAlan နဲ့ Joan နဗီး၏သား။
အက်ဒွပ် Woodville ။ (-? 1488) ။
မာရိသညျ Woodville (1456 -?) ။ ဝီလျံဟားဘတ်ဝီလျံဟားဘတ်နှင့်အန်း Devereux ၏သားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။
ကက်သရင်း Woodville (1458 - 18 မေလ 1497) ။ အိမ်ထောင်သည်ဟင်နရီဖြတ်, Humphrey ဖြတ်ခြင်းနှင့်မာဂရက် Beaufort (ထိုတစ်ဦးဖေဘက်ကပထမဆုံးဝမ်းကွဲ၏သား မာဂရက် Beaufort ဦး Edmund ရှိဖို့နဲ့လက်ထပ်နှင့်ဟင်နရီ VII ၏မယ်တော်သူ) ။ အိမ်ထောင်သည်ဂျက်ရေရှိဖို့, ဦး Edmund ရေရှိဖို့ရဲ့အစ်ကို, Owen ရေရှိဖို့နဲ့နှစ်ခုစလုံး၏သားတို့သည် Valois ၏ကက်သရင်း ။ အိမ်ထောင်သည်ရစ်ချတ် Wingfield ဂျွန် Wingfield နှင့်ဧလိရှဗက် FitzLewis ၏သား။
ပေါ်တူဂီ၏ Isabella (1503 - 1539)
စာရာသည်Grimké: Antebellum Anti-ကျွန် Feminist
သမ္မတကတော်ဂျိန်း Grey က: ကိုးနေ့ဘုရင်မ
Isabella d'Este, အ Renaissance ၏သမ္မတကတော်
အမြိုးသမီးတ Power: ရှေးအဲဂုတ္တုပြည်၌ဆယ်ရှစ်နှစ်မင်းဆက်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်
ရယ်စရာအားဖြင့် Live မှကိုးကား
New Orleans တွင်သလားမှ Witchy အရာ
Stonehenge, Wiltshire, ဗြိတိန်
အမှတ်ရစရာ - တစ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်နေ့စွဲများကိုသတိရပါလုပ်နည်း
ယင်းအကြောင်း NHL ၏မူရင်းခြောက်သူကားအဘယ်သူဖြစ်ပါသလား
အရေးပါသောမှတ်တမ်းအတွက်သုတေသန: မွေးဖွားခြင်း, သေဆုံးမှု & အိမ်ထောင်
အာကာသ-ရေးရာ Music ဟာစိတ်ကူးယဉ် Excites
ဂေါက်ကွင်းရဲ့ Teeing မြေပြင်, Plus အား၎င်း၏စည်းကမ်းများနှင့်အ Etiquette ရှင်းပြ
ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ Pantheon: ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောရှေးဗိသုကာနောက်ကွယ်မှာအဆိုပါသမိုင်း
လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု 15 ရက်စက်စွာ Funny '' Thrones ၏ဂိမ်း ''
R ကိုနှင့်အတူစတင် Sanskrit စကား
သင်ဟာအဲဒီမောပန်း Corvette အင်ဂျင်တည်ဆောက်ပေးနေသို့မဟုတ်အစားထိုးသငျ့သလော
ကင်တပ်ကီကျောင်းသားများ, K သည်-12 အခမဲ့အွန်လိုင်းပြည်သူ့ကျောင်းများများစာရင်း
သမိုင်းဖန်ဆင်းပါတယ်ဘယ်သူ Native အမေရိကန်သူရဲကောင်းများ
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 နှင့် 2022 ခုနှစ် Durga Puja နှင့် Dusshera များအတွက်ရက်စွဲများ
Janmashtami အပေါ်မွေးနေ့ Krishna ဟိန္ဒူအခမ်းအနားကျင်းပ
လူနည်းစုများအတွက် Grant ကများနှင့်ပညာသင်ဆုအရင်းအမြစ်များ
ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲများမှာသေနတ်များ Start ကိုရှင်းပြ